2020 နှစ်ထဲမှာ ဘဝတစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲမည့် နေ့ဖွားများအတွက် ဖတ်ရန် မှတ်ရန်
07/05/2020 admin 0
2020 နှစ်ထဲမှာ ဘဝတစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလဲမည့် နေ့ဖွားများ (1)ကြာသပတေး အရာရာ ထိပ်ဆုံးရောက် အောင်မြင်မယ့်နှစ် ဖြစ်လတ္တံ …. အချစ်ရေးကိစ္စတွင် ကိုယ့်ထက်သာမယ့်သူ (သို့) ကိုယ့်ထက်ကြီးမယ့်သူနှင့် ဖူးစာဆုံရလတ္တံ နှလုံးသားနှင့် ဦးနှောက် ပေါင်းစပ်ကာ ကြင်ဖက်ရွေးလတ္တံ …. ငွေဝင်ကောင်းလတ္တံ ချေးထားငွေ များပြန်ရလတ္တံ ….မိခင်နှင့် […]
မိန်းမဆိုတာ ၁၈ နဲ့ ၂၂ ကြားမှာ အာဖရိကလိုပဲ ကြမ်းတမ်းမှုတစ်ဝက်၊ ဆန်းပြားမှုတစ်ဝက် အရိုင်းဆန်တယ်
မိန်းမဆိုတာ..၊ ၁၈ နဲ့ ၂၂ ကြားမှာ အာဖရိကလိုပဲ။ ကြမ်းတမ်းမှုတစ်ဝက်၊ ဆန်းပြားမှုတစ်ဝက်။ အရိုင်းဆန်တယ်။ သဘာဝ အလှတွေလည်း ရှိတယ်..။ ၂၃ နဲ့ ၃၀ ကြားက ဥရောပနဲ့ တူတယ်။ အသိအမြင် ထွန်းကားပြီ။ ပွင့်လင်းပြီ။ တကယ့်တန်ဖိုးစစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီ။ သိပ်တော့ မလတ်ဆတ်တော့ဘူး။ […]
ဘ၀ဆိုတာ ရေစက်ပါရင် ဆုံဆည်းရမယ် ဖူးစာပါရင် ညားရမယ် ဝဋ်ကြွေးပါရင် ပေးဆပ်ရမယ်
အခါတစ်ပါး အရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်ဟာ နတ်ပြည်သို့ ဒေသစာရီ ကြွချီရာ တန်ခိုးကြီးမား သော နတ်သား တစ်ဦးရဲ့ ဗိမာန်သို့ရောက်သော် ထိုနတ်သားကို မေးတယ် “အသင်နတ်သား သင်သည် အဘယ် ကောင်းမှုကြောင့် ဤကြီး ကျယ် ခမ်းနားသော နတ်စည်းစိမ်ကို ရရှိ သလဲ”လို့ မေးပါတယ်။ ထိုအခါနတ်သားက”အရှင်ရား တပည့်တော် […]
ခခယယ လှူရတဲ့ အလှူခံ ပုဂ်ဂိုလျမြိုး မွငျဖူးအောငျ ကွညျ့သှားနျော….
လမျးထဲ က ဈေးဆိုငျမှာ စိတျဝဒေနာရှငျ ဦးလေး ဈေးဝယျနတော လှူမယျ့သူက ရှငျးပေးတာ လကျမခံဘူး။ တကယျ့ကို စိတျထားဖွူစငျပွီး၊ ရိုးသားတဲ့ ဦးလေးကွီးပါ။ သူအိမျလေးထိ ထမငျးလိုကျကြှေးတာ လညျး မစား။ ထမငျးဘူးကို ထားခဲ့မယျပွောတော့လညျး လကျမခံ။ အခြိနျဆှဲပွီး ဘယျလိုလှူရမလဲ စဉျးစားရငျ ဟိုမေး ဒီမေး […]
အသုဘရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီးအအေးတိုက်မှထုတ်ယူလာပြီး သေဆုံးသူရဲ့အိမ်သို့ပို့လိုက်သောအခါ…
အသုဘ ရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီး အအေးတိုက်မှထုတ်ယူလာပြီး နာရေးကားပေါ်တင်၍ သေဆုံးသူရဲ့အိမ်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။ အိမ်ရှေ့ကိုနာရေးကားရောက်လာတော့ မိဘကျေးဇူးတွေနဲ့ အယူသီးမှုတွေကို ခွဲခြားသိမြင်နိင်ပြီး သိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အမှန်တရား။ အသုဘရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီးအအေးတိုက်မှထုတ်ယူလာပြီး နာရေးကားပေါ်တင်၍ သေဆုံးသူရဲ့အိမ်သို့ပို့ဆောင်ဖို့မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်… အိမ်ရှေ့ကိုနာရေးကားရောက်လာတော့ အလောင်းကိုအိမ်ထဲသွင်းမယ် လုပ်စရာရှိတာလုပ်မယ်ပေါ့ ကားပေါ်ကနေအလောင်းချမယ်လုပ်တော့ အိမ်ရှင်တွေကအပြေးရောက်လာပြီး မျက်ရည်လေးစမ်းတမ်းတမ်းနဲ့ ဆရာတို့ အိမ်ထဲအလောင်းမပြင်ဘူးနော် […]
အပျိုဖော်ဝင်ခါစ ၁၆ နှစ်သမီးလေး အခန်းထဲကို အဖေတစ်ယောက် ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ…..
အပျိုဖော်ဝင်ခါစ ၁၆ နှစ်သမီးလေး အခန်းထဲကို အဖေတယောက် ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ … ၁၆ နှစ်သမီးလေး အခန်းထဲကို အဖေတယောက် ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ …သမီးမရှိပဲ အခန်းက သပ်ရပ်နေပြီး စားပွဲပေါ်မှာ စာတစ်​​စောင်​ တင်ထားတာ တွေ့ လိုက်ပါတယ်။ စာကို ဖတ်ကြည့်တဲ့ အခါ…… ချစ်သော ဖေဖေ…..စာကို […]
မဖတ်အားသေးရင်တောင် ဒီပို့စ်လေးကို သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ သိအောင် ရှဲပေးလိုက်ပါ
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများခင်ဗျား ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီပို့စ် လေးကို သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ သိအောင် ဂရုတွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မက်စင်ဂျာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တိုင်းလိုင်းပေါ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရှဲပေးလို့ရမလားခင်ဗျား မကြာခင်မှာပဲ သစ်သီးတွေ လှိုင်လှိုင်ပေါတဲ့ ရာသီကိုရောက်တော့မှာပါ ဥပမာ သရက်သီး ဒူးရင်းသီး ကနစိုသီး ကြက်မောက်သီး မင်းကွတ်သီး […]
အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ အလုပ်သမားများကို လစာအပြည့်မပေးပဲ သဘောမတူလျှင် မောင်းထုတ်မှု ဖြစ်ပွား….
အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ အလုပ်သမားများကို လစာအပြည့်မပေးပဲ သဘောမတူလျှင် မောင်းထုတ်မှု ဖြစ်ပွား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေပြည်သာမြို့နယ် စက်မှုဇုန်(၁)ရှိ ပျော်ရွှင်လင်းလက် အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ အလုပ်သမားများကို ဧပြီလလုပ်ခလစာ အပြည့်အဝမပေးဘဲ လစာလျှော့ပေးခြင်းကို သဘောမတူပါက စက်ရုံအတွင်း ပေးမဝင်ဘဲ စက်ရုံ အပြင်သို့ မောင်းထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း အလုပ်သမားများထံမှ သိရသည်။ ‘မေ ၅ […]
အင်းစိန် မှ (၁၂) ဦး သည် တစ်အိမ်တည်းနေသူ များဖြစ်ပြီး တစ်လမ်း လုံးနီးပါး ကူးစက်နိုင်ခြေရှိ…
အင်းစိန် မှ (၁၂) ဦး သည် တစ်အိမ်တည်း နေသူ များဖြစ်ပြီး တစ်လမ်း လုံးနီးပါး ကူးစက်နိုင်ခြေရှိ အင်း စိန်မြို့နယ်က COVID-19 အတည်ပြု သူနာပြုဆရာမ (၃) ဦးနဲ့ ထိတွေ့မှု ရှိခဲ့သူ (၁၂) ဦး ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူနာပြုဆရာမတွေဖြစ်တဲ့ […]
ဒေးဗစ်လားတို့အဖွဲ့အား ရပ်ကွက်မှလက်မခံသဖြင့် ဆေးရုံတွင် Q ဆက်ဝင်နေရပြီ
Case 50 တရားဟောဆရာ ဒေးဗစ်လားတို့အဖွဲ့ဆေးရုံဆင်းခွင့်ရပြီး နေအိမ်တွင် Quarantine နေဖို့ကို နေထိုင်သည့်မြို့နယ်ပြည်သူများက လက်မခံသဖြင့် ဆေးရုံတွင်ဆက်လက် Q ဝင်နေရ Quarantine ရက်ပြည့်ပါက ဆက်လက်တရားစွဲဖို့ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ Case-50 တရားဟောဆရာ ဒေးဗစ်လားတို့အဖွဲ့ ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ရရှိသွားသောကြောင့် နေအိမ်တွင် Quarantine နေဖို့ […]